ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် စမတ်ဖုန်းအလုံးရေ တစ်သန်းအထိ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်ဟု တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Huawei က ပြောကြားသည်။ “မြန်မာမှာ Huawei ရဲ့ တိုးတက်နှုန်းဟာ အတော်လေးအားရစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ carrier business ပိုင်းမှာ တည်ငြိမ်နေခဲ့ပြီး consumer business အပိုင်းတွေမှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးဖြစ်သည့် eSIM များကို ဈေးကွက်တွင်းသို့ နောက်ဆုံးမှ ဝင်ရောက်လာသည့် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် Mytel က ဧပြီ ၈ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည်။ eSIM သည် စမတ်ဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်းမြုပ်နှံထားသည့် အီလက်ထရောနစ် ဆင်းကဒ်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် အသုံးပြုနေသောကွန်ရက်ဆိုင်ရာဒေတာများကို ဆင်းကဒ်မလိုပဲ သိမ်းဆည်းအတည်ပြုနိုင်သည့်.
စိန့်မာတင်ကျွန်းပေါ်သို့ တိုက်ခိုက်ရေးရိုင်ဖယ်များ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်များစွာ တက်ရောက်နေသည့် ပုံများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့(ဘီဂျီဘီ)က ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
Episode 72: I School Myanmar တည်ထောင်သူ နော်ဇာဖြူခန့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း